चीन वेल्क्रो जिपर स्ट्यान्ड अप पाउच निर्माता र आपूर्तिकर्ता - Rijing Techtronic
घर > उत्पादनहरू > लचिलो प्याकेजिङ्ग > स्ट्यान्ड अप पाउच > वेल्क्रो जिपर स्ट्यान्ड अप पाउचहरू
वेल्क्रो जिपर स्ट्यान्ड अप पाउचहरू
वेल्क्रो जिपर स्ट्यान्ड अप पाउचहरू लचिलो प्याकेज हुन् जुन कुनै पनि उत्पादनमा फिट हुन्छ। झोलाको जिपरलाई वेल्क्रो जिपरमा परिवर्तन गर्ने कुरा के हो भने झोलालाई विशेष बनाउँछ। Velcro अन्य zippers भन्दा बढी उपन्यास छ। खोल्न पनि सजिलो छ। भेल्क्रो जिपर स्ट्यान्ड अप पाउचहरू निर्माण गर्ने प्रमुख कारखानाको रूपमा, हामीले ISO र BRC प्रमाणपत्रहरू प्राप्त गरेका छौं, उपयुक्त मूल्य र उत्कृष्ट गुणस्तर, युरोपेली र अमेरिकी बजारहरूमा राम्रो आपूर्ति गर्दछ।
वेल्क्रो जिपर स्ट्यान्ड अप पाउचहरू एक लचिलो प्याकेज हो जुन कुनै पनि उत्पादनमा फिट हुन्छ। झोलाको जिपरलाई वेल्क्रो जिपरमा परिवर्तन गर्ने कुरा के हो भने झोलालाई विशेष बनाउँछ। Velcro अन्य zippers भन्दा बढी उपन्यास छ। खोल्न पनि सजिलो छ।
आरजे प्याकको वेल्क्रो जिपर स्ट्यान्ड अप पाउचहरू सुरक्षित र रसायन, अक्सिजन र चिसोबाट सुरक्षित छन्। एकै समयमा, हाम्रा झोलाहरूमा छिटो तातो छाप र दबाब प्रतिरोध छ, झोला चुहावट र उत्पादन बिग्रनबाट जोगाउँछ उचाइबाट खस्दा पनि। यी गुणहरूले तपाईंका उत्पादनहरूलाई सेवा दिनेछन् र तपाईंको उत्पादनहरूमा थप व्यापारिक मूल्य ल्याउनेछन्।
10 रङ सम्म
PET, AL, VMPET, PE, PA, BOPP, CPP आदि सबै खाद्य ग्रेडमा र EU र FDA मानक अनुरूप।
3.Velcro जिपर स्ट्यान्ड अप पाउच सुविधा र अनुप्रयोग
वेल्क्रो जिपर स्ट्यान्ड अप पाउचका विशेषताहरू
द्रुत र खोल्न / बन्द गर्न सजिलो
· पाउडर मार्फत सील
· छेडछाड-स्पष्ट (जिपर माथि तातो सील)
· सही पङ्क्तिबद्धता बिना जिपर सिलहरू
· टिकाउ प्लास्टिक जिपरले झर्ने र आँसुको प्रतिरोध गर्दछ
· श्रव्य बन्द र खुला
· अद्वितीय र आकर्षक
Velcro जिपर स्ट्यान्ड अप पाउचहरूको विशिष्ट अनुप्रयोगहरू
· नुहाउने साल्ट र भिजाउने
· सुख्खा खाना
· लुगा र डिश डिटर्जेंट
· घरपालुवा जनावरको खाना
· क्यान्डी र खाजा
4.Velcro जिपर स्ट्यान्ड अप पाउच विवरण
Velcro प्रेस लक क्लोजरहरूले खोल्ने/बन्द गर्दा एक विशिष्ट आवाजको साथ सहज, सजिलो बन्द प्रदान गर्दछ।
5.वेल्क्रो जिपर स्ट्यान्ड अप पाउच योग्यता
6. वेल्क्रो जिपर स्ट्यान्ड अप पाउचहरूको वितरण, ढुवानी र सेवा
म Velcro जिपर स्ट्यान्ड अप पाउचहरूको अर्डर मात्रा अनुसार 20 - 40 दिन लिन्छु
2. तपाईंसँग के प्रमाणपत्रहरू छन्?
हामीसँग BRC, HACCP, SGS र ISO छ। र हामीसँग यी वातावरणीय वेल्क्रो जिपर स्ट्यान्ड अप पाउचहरूको लागि पुन: प्रयोग गर्न मिल्ने र कम्पोस्टेबल प्रमाणपत्रहरू पनि छन्।
4. तपाईको MOQ के हो
5. के तपाईको विदेशमा कार्यालय छ?
6. तपाईं एक कारखाना हो र तपाईं प्याकेजिङ्ग समाधान प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ?
7. तपाईंको मुख्य उत्पादनहरू के हो?
हाम्रा उत्पादनहरूमा स्ट्यान्ड अप पाउच, गसेट ब्याग, फ्ल्याट बटम पाउचहरू, २/३ साइड सिल ब्याग, स्पाउट पाउच र रोल स्टक फिल्म, आदि समावेश छन्। र हामीसँग पुन: प्रयोग गर्न मिल्ने र कम्पोस्टेबल भेल्क्रो जिपर स्ट्यान्ड अप पाउचहरू उत्पादन गर्ने प्रशस्त अनुभव छ।
बीजको लागि डोयप्याक
पाल्तु कुकुर खानाको लागि Mylar झोला
फलफूलका लागि डोयप्याक